कोरोना रिपोर्टमा 'सिटी भ्यालु' भनेको के हो? :: डा. शेरबहादुर पुन :: Setopati
कोरोना रिपोर्टमा 'सिटी भ्यालु' भनेको के हो?
केही समय अगाडिसम्म कोरोनाको रिपोर्टमा पोजेटिभ हो वा नेगेटिभ भन्नेमात्र उल्लेख हुन्थ्यो। अहिले भने रिपोर्ट दिँदा त्यसमा कोरोनाको जीनको ‘सिटी भ्यालु’ समेत समावेश गर्न थालिएको छ।
त्यसैले अहिले धेरैको जिज्ञासा नै सिटी भ्यालु के हो भन्नेमा छ।
सिटी अथवा 'साइकल थ्रेसहोल्ड' को भ्यालु(अंक) चिकित्सकको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट बिरामीमा भाइरसको भार, संक्रमणको गम्भीरता र संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षमता अनुमान गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया सिटी भ्यालुको अंक ३७ पछि कोरोना नेगेटिभ भएको मानिने गरिन्छ। सिटी भ्यालु जति कम भयो त्यति नै भाइरसको भार बढी, संक्रमणको लक्षण गम्भीर र बढी संक्रामक हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ।
तर सिटी भ्यालुको अंक जति बढी भयो त्यति नै भाइरसको भार कम, लक्षण र संक्रामक कम हुने अनुमान गरिन्छ।
अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको सिटी भ्यालु पनि सुरूमा कम देखिने र उपचार गर्दै जाँदा बढ्दै गएर कोरोना नेगेटिभ आएको देखिन्छ।
होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूले १४ दिन वा तेस्रो सातापछि पिसिआर परीक्षण गर्दा सिटी भ्यालु पहिले गरेको परीक्षणमा भन्दा बढेर नेगेटिभ आएको पाइन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७, ०१:३२:००